Tani waa sida Söderhamn loo maamulo - Söderhamns kommun Gamla Webben
Warbixinta bukaanka Staffangymnasiet
| Tani waa sida Söderhamn loo maamulo
Kommunfullmäktige. Waa Degmada Söderhamns oo ah hay'adda ugu sareysa go'aan qaadashada siyaasadeed ayaa leh 49 xubnood oo la doorto. Waxay dejiyeen ujeedooyin iyo tilmaamo loogu talagalay hawlaha degmada. Golaha degmada ayaa la kulmaya Isniinta ugu dambeysa ee bisha 18.00 i Rådhuset.
Kommunstyrelsen. Ayaa mas'uul ka ah hirgelinta iyo dabagalka go'aaminta.
Taageero ahaan, dawladda hoose ayaa leh maamul - Kommunstyrelseförvaltningen, oo la shaqeeya maamulka iyo isuduwidda dhammaan hawlaha degmada.
Maamul kasta waxaa hogaaminaya guddi siyaasadeed.
Hawlaha maalinlaha ah waxaa fuliya maamulka degmooyinka kala duwan:
Waxay masuul ka tahay daryeelka qofka iyo qoyska. Wax ka qabashada kaalmada dhaqaale, daryeelka caruurta, dhalinyarada iyo daryeelka dadka waaweyn, la-talinta, adeegga dadka dalka u soo guuray, khamriga iyo ka hortagga daroogada.
Waxay mas'uul ka tahay dugsiga barbaarinta, xarunta madadaalada, fasalka lix jirka, dugsiga hoose iyo dugsiga aasaasiga ah iyo dugsiga dhaqanka.
Waxay masuul ka tahay bay'ada, xakamaynta caafimaadka, xakamaynta cuntada iyo oggolaanshaha dhismaha.
Mas'uuliyadda qorsheynta iyo horumarinta arrimaha dhaqanka iyo wakhtiyada firaaqada. Adeegyada wadooyinka, waddooyinka, beeraha iyo adeegyada cuntada.
Waxay u xilsaaran tahay daryeelka waayeelka iyo naafada. Waxay masuul ka tahay daryeelka guriga, daryeelka iyo guryaha daryeelka iyo kaalmada shakhsi ahaaneed. Waxay masuul ka tahay daryeelka caafimaad qaarkood.
Mas'uuliyiinta baarista iyo ragga wanaagsan. Waxay masuul ka tahay carruurta aan fasax laheyn ama dadka aan fasaxnayn ee aan laguula dhaqmin si cadaalad daro ah.
Filmka: U soo guuri Iswiidhan
Fiiri filin ku saabsan degitaanka degmo yar!
Qariirado muhiim ah
Meel lagu dabbaasho